OkGoJobs – The best way to find jobs in Myanmar
We arearecruitment agency focusing on matching the best talent with the best jobs. We use the latest technology, online and social media strategy to provide high quality candidates to our corporate clients.
လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းအတွက် သင့်တော်၍ အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀န်ထမ်းကောင်းများကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ လူမှု့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များကို အသုံးပြု၍ လျင်မြန် ထိရောက်စွာဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်
Accountant – Thuwunna Wadi Co., Ltd
#Urgent (အမြန်အလိုရှိသည်) #okgojobs (အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်း) မှတဆင့်လျှောက်ထားရန် • အလုပ်ရလျှင်မည်သည့်ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ THUWUNNA WADI CO.,LTD ကုမ္ပဏီတွင် Accountant Post ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ လိုအပ်နေပါသည်။ # Accountant Post (Female/ Male ) (1) Post • အလုပ်ချိန် ( Monday to Friday ) (8:30 AM to 5:30 PM) • အခြေခံလစာ – ( ၄ သိန်း မှ ၅ သိန်း ) • အသက်(၃၅)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် • ပညာအရည်အချင်း – … Continue reading "Accountant – Thuwunna Wadi Co., Ltd"
Tour Agent (Bagan)
အလုပ်လျှောက်ထားလိုပါက- ညောင်ဦးမြို့နယ်ရှိ Nanmar Myanmar (Special Incentive Travels Tours) ကုမ္ပဏီတွင် Tour Agent တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ လိုအပ်နေပါသည်။ #Tour Agent (Male Only ) (2) Posts (ညောင်ဦးမြို့နယ်တွင် ထမ်းဆောင်ရန်) အခြေခံလစာ – ၁၂၀,၀၀၀ ++ (နေ/စား/ငြိမ်း) အသက် – ၂၅-၃၀ အတွင်း • ပညာအရည်အချင်း – (၁၀ တန်းအောင် / ဘွဲ့ရ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည် • စကားပြောချိုိသာ၍ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည် • ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ( Photo Shop, Email အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်) • သွက်လက်တက်ကြွစွာဖြင့် … Continue reading "Tour Agent (Bagan)"
11(H), Pauk Zaydi Lane 2, 8 Miles, Mayangone Tsp, Yangon 11062, Myanmar
09 42823 8006
Employers: [email protected]